Afrika Atsimo: Firohotana mividy tapakila nony manakaiky ny Fiadiana izay ho Tompondaka Erantany 2010 · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 25 Avrily 2010 6:20 GMT
Vakio amin'ny teny 繁體中文, 简体中文, Français, Español, বাংলা, Aymara, English
Satria efa manakaiky ny FIFA World Cup 2010, dia namoaka ny andiany farany amin'ny tapakila ny FIFA, natokana ho an'ireo teratany Afrikana Tatsimo sy ireo “matimatin'ny”baolina kitra amin'ny maha-ao amin'ny tanin'i ‘Cape of Good Hope’ [Cap de Bonne-Esperance] rahateo no hanaovana ity hetsika goavana ara-panatanjahantena ity. Ny kinendry tany amboalohany amin'ny famarotana dia 500,000 raha kely indrindra, izay hamidy mivantana eny amin'ny mpaninjara sy ireo toerana akaikin'ny vahoaka. Araka izay itateran'ny blaogy White Cottage azy, nanamarika ny andro voalohany ny fisavoritahana ary nisy mihitsy aza “matimaty” namoy ny ainy taorian'ny fianjerana teny ampilaharana hividy tapakila:
Ny andro voalohany amin'ny fotoana farany natao hivarotana tapakila fidirana amin'ny fiadiana izay ho Tompondaka Erantany amin'ny baolina kitra dia niafara tamin'ny fisavoritahana, miaraka amina filaharam-be teny amin'ireo toeram-pivarotana, iray tamin'ireo “matimaty” amin'ny baolina kitra no namoy aina noho ny fijanonan'ny fo teny ampilaharana, ary tsy nandeha koa ny rindrambaikon'ny FNB.
Nanamarika ihany koa ilay blaogy fa:
…ireo “mpanararaotra” tendan-kanina dia nividy ireo tapakila, ary mikasa ny hivarotra azy ireo indray avy eo, mba hahazoan'izy ireo tombony, ary fantatra ankehitriny, na dia efa voalaza mazava nandritra ny fivarotana aza fa, tsy azo atao ny mivarotra azy ireny indray amin'olona hafa, satria ny laharam-pamantarana ID an'ilay olona mpividy dia efa misoratra eo amin'ilay tapakila. Midika izany fa ireo mpivarotra an'ireo tapakila ireo dia tsy afaka manome azy ireny maimaim-poana amin'olon-kafa !
Nilaza ny nahazo azy manokana ny Blaogy Soccerphile:
Na dia nilaza aza ny FIFA fa misy tapakila ho an'ireo lalao rehetra, ireo olona izay nilahatra hatramin'ny fito ora maraina teo amin'ny fivarotana tapakila, efa tonga tany amin'ny 1400 raha araka ny fanisana, dia nilazana raha tsy tamin'ny roa ora tolak'andro fa tapakila sokajy 1 ihany sisa no misy ho an'ireo lalao sasany
Mitotaly 1610 ireo tapakila lafo tamin'ireo teratany310 mpividy tao amin'ny toeram-pivarotana foibe ora iray monja taorian'ny fisokafan'izy ireo tamin'ny 9 ora maraina, ary tapakila 2166 ihana koa no lafo tamin'ireo mpankafy 470 tao amin'ny sampana FNB. Ny foibe misahana ny fanontàna ny tapakila, izay miandraikitra ireo fantsom-pivarotana rehetra dia tsy maintsy niatrika ireo fangatahana maro nanaerana ny firenena; vokany, niatrika fahataràna tany amboalohany nanoloana ny fandrindrana ny fanafarana ny tapakila.
Ny Worldbbnews.com dia afaka nifandray tamin'ny lehiben'i Danny Jordaan filohan'ny komity mpikarakara izay toa nanamaivana ilay fisavoritahana:
Niezaka nanadio tena tamin'ny tsikera i Danny Jordaan, lehiben'ny komity mpikarakara ny Amboara eran-tany: “Mitranga izany rehefa mampiasa ny teknolojia isika”. Amin'ny fotoana izay tsy tianao hisian'ny olana, misy ny olana. Nanonta ireo tapakila tamin'ity maraina ity izahay ary nandeha tsara ilay izy. Avy eo tonga ianao niaraka tamin'ny cameras, menatra ireo fitaovana ary tsy nisy zavatra nandeha. Nefa faly aho fa niverina amin'ny laoniny ihany izany.”
Nilaza izao tamina mpanao gazety Britanika iray i Danny Jordaan:
Tsy mino aho fa mahatakatra ny atao hoe fikorotanana ianareo. Toa midika izany fa mbola tsy teo ianareo rehefa mividy tapakila ireo adalam-baolina kitra. Ny zava-nitranga androany dia mitovy tsy misy valaka amin'ny fividianana tapakila tamin'ny lalaon'ny Manchester United na Arsenal.…
Any Pretoria, niteny ny Amerikana iray any Pretoria:
Nandeha fiara tao Pretoria aho androany. Tsy nandeha ny iray tamin'ireo milina mpandrindra ny fifamoivoizana ary dia nampanonofy ratsy ny fitohanana. Farany, rehefa tonga tamin'izay alehako aho dia indreo fa feno olona milahatra be miolakolaka manoloana toeram-pivarotana roa – manao vona, mihodikodina, ary mameno toera-malalaka kely iray manasaraka tangoron-trano roa…Efa namidy ireo tapakila tamin'ny Amboara eran-tany. Maro be loatra ny olona ka tsy afaka miala aho na mandeha na aiza na aiza, noho izany dia nipetraka tao amina toerana fisotroana cafe iray aho ary nijanona tao nandritra ny adiny telo.
Niteny ny World Soccer Blog fa toa tsy liana loatra amin'ny fividianana tapakila ireo Afrikana Tatsimo:
Maherin'ny 500,000 ireo tapakila namidy tany Afrika Atsimo ho an'ny dingana famaranana . Miatrika asa goavam-be amin'ny fivarotana azy ireo ao anaty ny roa volana manaraka ry zareo mpikarakara, raha tsy izany dia no olona miparitadritaka no hijery ireo fifaninanana. Haingana be ny fivarotana ireo tapakila any Etazonia, elaela any Eropa, sy ny any Japana ary any Asia amin'ny ankapobeny, mahakivy izy ireny.
Kanefa misy ny fambara fa na ireo Afrikana Tatsimo aza tsy miraika akory ny hividy tapakila. Ireo mpifanandrina tsy dia mahasarika olona toy ny New Zealand, Slovenia, Algeria, ary Grece no atahorana amin'izany. Nataon'ny Governemantan'ny Afrika Atsimo maimaimpoana mihitsy ny visa eo ampahatongavana mba hisarihana betsaka ireo mpankafy Fiadiana ny ho Tompondaka Erantany. Nametraka foibe eo an-toerana ihany koa ry zareo mba hanafainganana izany fahazoana visa izany.